लकडाउनमा सकारात्मक सोच- विचार - कान्तिपुर समाचार
चैत्र २३, २०७६ सुशीला शर्मा
अहिले हामी प्रत्येक क्षण कोरोनाले भकाभक मानिसको मृत्यु भएका खबरले नीरस भइरहेछौं । कुनै सिर्जनात्मक काम गर्न पनि जाँगर छैन । विशेष गरी सहरी क्षेत्रमा लकडाउनले हामी एउटै कोठाभित्र गुम्सिएर बस्न बाध्य छौं । साथीभाइसँग कुराकानी गर्दा पनि नैराश्यपूर्ण भावमा पोखिइरहेछौं । गाउँघरमा भने स्थिति अलि फरक छ ।
मानिसहरू बस्तुभाउ, खेतीपातीलगायतका काममा अरू बेलामा झैं खटिरहेका छन् । स्वास्थ्यकर्मीले सामाजिक दूरी कायम गर्ने, साबुन–पानीले हात धुने, सरसफाइमा ध्यान दिने, पौष्टिक खाना र तरल पदार्थ खाने सुझाव दिएका छन् । यसो गर्दा कोरोना भाइरसबाट बँच्न सकिन्छ ।
लकडाउनले व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई अप्ठ्यारोमा पारिरहेको छ । सबैलाई सञ्चित खाद्यान्न कहिले सकिएला भन्ने डर छ । उता दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुरहरूलाई कोरोना महामारी हो र जो कोही प्रभावित हुन सक्छन् भन्ने खासै चिन्ता देखिँदैन । उनीहरू पैदलै हिँडेर ज्याला मजदुरी गर्ने ठाउँसम्म पुगेका छन् । भारतमा काम गर्ने सयौं मजदुर भने कोरोनाको हल्लाले आफ्ना परिवार सन्तानसँग बिछोडिनु पो पर्ने हो कि भनेर अतालिँदै क्वारेन्टाइन र लकडाउनको पर्बाह नै नगरी देशको सिमानामा आइपुगेका छन् । कामको खोजीमा अर्काको देश गएका नेपाली मजदुरलाई आफ्नो घरमा आउन दिने कि नदिने भन्ने विवाद अहिले भइरहेको छ ।
जब संकटहरू आइपर्छन् तब धेरै मानिस अस्थिर अनि विचलित भएर हडबडाउने, चिन्ता लिने र निराश हुन्छन् । यस्तै संकटहरूको सामना गर्न व्यक्तिले भावनात्मक ज्ञानको अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । कतिपयको हुर्काइसँगै प्राकृतिक रूपमै बौद्धिक हुन सक्छन् । यस्ता व्यक्तिले आफू सम्हालिने र परिवार तथा समाजलाई पनि सम्हाल्ने क्षमता राख्छन् । भावनात्मक ज्ञान त्यो क्षमता हो जसले व्यक्ति स्वयंको भावनालाई सकारात्मक व्यवस्थापन गरी प्रभावकारी तरिकाले सञ्चार गर्न, अरूलाई समभावले हेर्न, चुनौतीहरूलाई कम गर्न र द्वन्द्व रोक्न सहयोग पुर्‍याउँछ । व्यक्तिलाई मानसिक रूपले बलियो र अरूसँगको सम्बन्ध पनि मजबुत बनाउँछ । त्यस्तै मानिसलाई आफ्नो कार्यमा सफल बन्न मद्दत गर्ने अनि लक्ष्य हाासिल गर्न पनि सहयोग गर्छ । मनोविज्ञ डेनियल गोलमेनका अनुसार भावनात्मक ज्ञानले सामान्यतया स्वव्यवस्थापन, स्वचेतन, सामाजिक सचेतना र सम्बन्ध व्यवस्थापनमा मद्दत पुर्‍याउँछ ।
कोरोनाले जुराइदिएको शून्य समयलाई भिन्न तरिकाले सोच्ने, बहस गर्ने, योजना बनाउने, प्रकृतिलाई बुझ्ने, गरिब र धनीबीचको खाडल पुर्ने, असमानताको अन्त्य गर्ने र अस्वस्थ होडबाजी त्याग्नेमा प्रयोग गर्नुपर्छ । त्यस्तै अन्धाधुन्ध तरिकाले आकाश छोएका विकसित भनिएका राष्ट्रहरूको पछि नलाग्ने, उपयोगी र प्रकृतिसँग मिल्ने खालका पुराना खेतीपाती, पशुपालन, वनजंगल रेखदेख र सहयोगलाई निरन्तरता दिने खालका ज्ञान र शिक्षा पनि अपरिहार्य भएको छ । कोभिड–१९ ले विश्व आक्रान्त छ । मानिसहरू त्रास छन् । समृद्धिको चरमचुली पुगेको भनिएका राष्ट्रहरूमै भकाभक यो भाइसरले मानिसहरू ढल्न थालेका छन् । लाग्दै छ सम्पत्ति र आविष्कारले मात्र प्रकृतिलाई जित्न सकिँदो रहेनछ । प्रकृतिमा रहेका जीवाणुुहरूले मानवमाथि जाइलागेर बेला–बेला हायलकायल पार्दा
रहेछन् । लकडाउनको अहिलेको अवस्थामा हामी शून्य भएर बस्नुभन्दा केके सिक्न सकिन्छ भनेर छलफल र मनन गर्न सक्छौं ।
केही प्रकृतिले सिकाउँछ, केही अध्ययन र व्यवहारबाट सिकिन्छ । सिकाइ हस्तान्तरण हुँदै जान्छन् । विज्ञान र गणित विषय आधुनिक र वैज्ञानिक चेतका लागि पढ्नु अनिवार्यजस्तै हो । तर यी विषयसँगसँगै सामाजिक सीपहरू पनि नयाँ पुस्ताका लागि अपरिहार्य छ । बालबालिकाको सन्दर्भमा द्वन्द्व कसरी व्यवस्थापन गर्ने र सरसफाइका नियम बेलैमा अनिवार्य रूपमा सिकाउनुपर्ने देखिन्छ । अधिकांश ग्रामीण समुदायमा सरसफाइ पहिलो प्राथमिकतामा पर्दैन । अर्को प्राथमिकतामा नपर्ने विषय खानपान हो । हामीले खाने र बालबालिकालाई दिने खानेकुरा स्वस्थकर छ वा छैन, बासी वा सडेगलेका हो कि होइन भन्नेमा ख्याल गरिएको पाइँदैन । केवल भोक र मीठो लागेको भरमा कहिले आवश्यकताभन्दा धेरै त कहिले खाँदै नखाने अनि जंक फुडमा अभ्यस्त भएको देख्न सकिन्छ । यी र यस्ता खानपान र जिम्मेवारीका कुराहरू पहिले ठूलाले व्यवहारमा लागू गर्ने र सिक्ने उमेरका बालबालिकालाई सिकाउँदै जानुपर्नेछ ।
सिक्ने मामलामा सबै मानिसको तरिका र क्षमता एउटै हुँदैन । कसैकसैलाई जिन्दगीको धेरै समय समाज र सामाजिकीकरणका विभिन्न विषयवस्तुबारे बुझ्नै लाग्छ । त्यसैले सिकाइ प्रक्रिया निरन्तर चल्छ भन्ने चलन नै छ । सबै मानिस सिकेका विषयमा विज्ञ नै हुन्छन् भन्ने पनि छैन । सिक्नु र सिकेका असल कुराहरू जीवनमा लागू गर्न सक्नु वास्तवमा सिकाइ हो । जब व्यक्ति आफैं विभिन्न पारिवारिक, आर्थिक र मनोसामाजिक समस्याहरूसँग साक्षात्कार हुँदैन तबसम्म सामाजिक सिकाइ कठिन हुन्छ । व्यक्तिले समाजबाट नै आफ्नो भावावेगलाई नियन्त्रण र पहिचान गर्न सिकिरहेको हुन्छ । यदि बालबालिकालाई यी सब नसिकाए सामाजिकीकरणमा समस्या पर्न सक्छ । सामाजिक सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन सर्वप्रथम व्यक्तिले स्वयंलाई भावनात्मक ज्ञानका लागि तयार पार्नुपर्ने हुन्छ ।
मानव जीवनलाई पुनर्विचार गर्ने र पुन:समायोजन अहिलेको आवश्यकता हो । यस्तो कार्यका लागि गन्नेमान्यले अहम् छोड्नुपर्छ, भ्रष्टाचार तोड्नुपर्छ, एक व्यक्ति मात्र बाँच्ने र आफ्नो परिवारका कैयौं पुस्तासम्मको सम्पत्ति साँच्ने तीव्र आकांक्षा बन्द गर्दै समाजप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारी महसुस गर्नुपर्छ । गरे असम्भव केही थिएन । हुर्किरहेका नयाँ पुस्ताहरूलाई सकारात्मक ज्ञानका लागि भावनात्मक शिक्षाको मद्दत लिनुपर्छ । यो परिस्थितिले जुराइदिएको समयलाई नेतृत्व तहबाटै असल कर्मको सुरुआत गरे, गर्न नसकिने केही छैन । प्रकाशित : चैत्र २३, २०७६ ०९:३७
स्वाब संकलन सुर्खेतमै सीमित
चैत्र २३, २०७६ कलेन्द्र सेजुवाल
सुर्खेत — कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को निदान गर्ने पीसीआर (पोलिमर्च चेन रिएक्सन) मेसिन आए पनि स्वाब संकलनमा समस्या देखिएको छ । तालिमप्राप्त जनशक्ति नहुँदा ग्रामीण क्षेत्रमा सम्भावित संक्रमितको स्वाब नमुना लिन सकिएको छैन ।
सुर्खेतबाट बिहीबार परीक्षण सुरु भएयता ४४ जनाको स्वाब संकलन भएको छ । ती सबै सुर्खेतका हुन् । अस्पतालका ल्याब प्राविधिक भरत देवकोटाका अनुसार यहाँबाट परीक्षण सुरु गर्नुअघि हुम्ला, जुम्ला, डोल्पा, सल्यान र दैलेखका बिरामीको स्वाब संकलन गरी काठमाडौं पठाइएको थियो । ‘अहिले हामीले नजिक–नजिकका बिरामीको नमुना संकलन गरेर परीक्षण गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘टाढा जान सकिएको छैन, बाहिरी जिल्लामा जान त झनै समस्या छ ।’
कर्णाली सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार ‘लकडाउन’भन्दा अघि र पछि गरेर भारतबाट करिब ८ हजार ७ सय व्यक्ति गाउँमा पुगेका छन् । गाउँ फर्किनेमा सबैभन्दा बढी जुम्लाका ५ हजार ८० जना छन् । तर त्यहाँ हालसम्म तीन जनाको मात्र स्वाब परीक्षण भएको छ ।
चैत ४ गते संक्रमित युवतीसँगै कतार एयरमा आएका एक व्यक्तिको पनि स्वाब परीक्षण हुन नसकेको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका डा. निमेष थापाले बताए । ‘स्थानीय स्वास्थ्यकर्मीले लक्षण देखिएको जानकारी दिएपछि गाडी जाने ठाउँको स्वाब संकलन गरिएको छ,’ उनले भने, ‘टाढा भए त जान पनि सम्भव हुँदैन ।’ दुई जनाको प्रतिष्ठानमै, एक जनाको तातोपानीमा र अर्का एक जनाको कालीकोटको सीमाक्षेत्र नाग्म पुगेर स्वाब संकलन गरी पठाइएको उनले बताए ।
अहिले सुर्खेतस्थित प्रदेश अस्पतालमा काठमाडौंबाट आएका माइक्रोबायोलोजिस्ट रामकृष्ण श्रेष्ठको नेतृत्वमा १० जनाको ल्याब प्राविधिक टोली छ भने जुम्लामा यससम्बन्धी ज्ञान भएका चिकित्सकद्वय निमेष थापा र विवेक पुनमगर छन् ।
प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका ल्याबसम्बन्धी फोकल पर्सन ओम आचार्यका अनुसार गाउँ–गाउँमा गएर नमुना संकलन गर्न एक जिल्लामा कम्तीमा ५–६ जनाको टोली आवश्यक पर्छ । अहिले हरेक जिल्लामा दुईदेखि तीन जना ल्याब प्राविधिक भए पनि तिनीहरूलाई कोरोना परीक्षणका लागि लिइने आरटी–पीसीआर (रियल टाइम– पोलिमर्च चेन रिएक्सन) स्वाब संकलन कसरी गर्ने भन्ने ज्ञान छैन । ‘उनीहरूलाई एक दिन अभिमुखीकरण दिएर सिकाउने हो भने त संकलन गर्न सकिहाल्छन्,’ उनले भने, ‘तर रुकुम पश्चिम, दैलेख र सल्यानका तीन जनालाई बाहेक अरूलाई यस्तो अभिमुखीकरण दिन सकिएको छैन ।’
प्रदेशभर स्वाब संकलन तथा परीक्षण गर्न सक्ने १२ जना प्राविधिक भए पनि ६ जना ल्याब केन्द्रमा व्यस्त रहनुपर्छ । बिहान ५ देखि राति १० बजेसम्म कोरोनाको परीक्षण हुने गरेको ल्याब प्राविधिक देवकोटाले बताए । यसले गर्दा स्वाब संकलन गर्ने जिम्मा चार जनाको काँधमा छ । जुम्लाका दुई जना त चिकित्सक भएकाले स्वाब संकलनका लागि टाढा जान सक्ने अवस्था रहँदैन ।
प्राविधिकका अनुसार संकलित स्वाब ढिलोमा ७२ घण्टाभित्र परीक्षणका लागि सिस्टममा राखिसक्नुपर्छ । यहाँका हुम्ला, मुगु र डोल्पाका केही बस्ती यति विकट छन् जहाँ पुग्न पालिकाको केन्द्रबाट दुई–तीन दिनसम्म लाग्ने गर्छ ।
आचार्यका अनुसार यसअघि औषधी तथा उपकरण पुर्‍याउन गएको हेलिकोप्टरमा हुम्ला र डोल्पा सदरमुकामनजिकका चार जनाको स्वाब संकलन गरी ल्याइएको थियो । ‘अलि बढी समस्या देखिएपछि हेलिकोप्टर लगेर भए पनि स्वाब संकलनका लागि जान सकिन्छ,’ उनले भने, ‘सामान्य लक्षण देखिएका व्यक्तिको भने संकलन गर्न गाह्रो छ ।’
भीटीएम पनि अभाव
डा. थापाले जुम्लामा संकलित स्वाब राख्ने भीटीएम (भाइरल ट्रान्सफर्म मिडिया) पनि अभाव रहेको बताए । उनका अनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालयले पठाएका १० मध्ये चारवटामा स्वाब संकलन गरी पठाइएसकिएकाले ६ वटा मात्र बाँकी छन् । धेरै व्यक्तिको स्वाब संकलन गर्नुपर्ने अवस्था आए सुर्खेतबाट मगाउनुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । प्रदेशमा भने भीटीएम पर्याप्त रहेको निर्देशनालयका फोकल पर्सन आचार्यले बताए । उनका अनुसार संघीय सरकारले पठाएका १ हजार भीटीएममध्ये अझै करिब ९ सय स्टक छन् ।
कर्णाली प्रदेश अस्पतालका निर्देशक डा. डम्बर खड्काले कर्णालीमा हालसम्म कोरोनाको संक्रमण नदेखिए पनि गाउँगाउँमा स्वाब संकलन गरी परीक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । वीरेन्द्रनगरस्थित क्वारेन्टाइनमा रहेका केही व्यक्तिको नमुना संकलन गरेपछि ल्याबको टोली गाउँतिर पनि जानुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘कुनै व्यक्तिमा पोजिटिभ रिपोर्ट आयो भने सोही ठाउँमा चिकित्सक खटाएर उपचार सुरु गर्ने प्रदेश सरकारले पनि भनिसकेको छ,’ उनले भने, ‘तर यसका लागि जतिसक्दो धेरै सम्भावित बिरामीको स्वाब संकलन गरी परीक्षण गर्नुपर्छ ।’
प्रकाशित : चैत्र २३, २०७६ ०९:३०